zimbabweNews – Page 844 – BBA
Chiwenga tells Chamisa that ‘Laws made in Parliament’
VICE President Constantino Chiwenga has hit out at MDC-Alliance leader Mr Nelson Chamisa for tarnishing the reputation of the Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) by making unsubstantiated claims of impropriety against its members when he was an integral part of their selection into the electoral management body. VP Chiwenga said laws are not promulgated on the […]
ZRP commander for this year’s harmonised elections Senior Assistant Commissioner Erasmus Makodza allayed fears of vote rigging by police officers saying only those on duty on voting day qualified for postal voting. “The Zimbabwe Republic Police wishes to set the record straight and allay fears of vote rigging by police officers as claimed in some […]
Chivayo blames ZPC board – Business Daily News Zimbabwe
CONTROVERSIAL businessman Wicknell Chivayo says he could have completed the 100 megawatt (MW) Gwanda solar project in eight months had it not been for the Zimbabwe Power Company (ZPC) board’s intransigence, documents show. The development comes as the Intratrek Zimbabwe founder’s technical partners Chint Electric have reportedly been sanctioned from trading on the African continent […]
‘Bond notes are here to stay’
RESERVE Bank of Zimbabwe governor John Mangudya says the country’s surrogate currency, the bond note, will be around for the foreseeable future. Zimbabwe introduced bond notes in 2016 to ease an acute cash crisis in the country. The bond, which operates together with the multi-currency system that was introduced in 2009 has, however, failed to […]
“Once bitten, twice shy” has justifiably become the philosophy of Zanu-PF following the near catastrophe at the White City Stadium in Bulawayo on 23 June when still unknown people attempted to assassinate the entire party leadership, including the President, via a grenade attack after a well-attended election rally. Following the attack that killed two members […]
Chamisa formally expels rebels – Business Daily News Zimbabwe
The Nelson Chamisa led MDC has formally expelled members who defied the party’s directive by registering to stand as independent candidates in th July 30 polls. Over 30 candidtes are standing on the MDC Alliance ticket, despite losing the party’s primary elections held recently.– Daily News Source link
President Emmerson Mnangagwa is brewing instability in the country by trying to manipulate the electoral process through the Zimbabwe Electoral Commission, MDC Alliance candidate Nelson Chamisa has said. Addressing thousands of supporters during protests to demand reforms from ZEC, Chamisa warned that instability would affect Zanu-PF members since they had owned most businesses and houses […]
FORMER President Robert Mugabe last week blew into the roof during inspection-in-loco at his former residence Zimbabwe House, protesting against suggestions that he donated some of his computers to his aides to secure his “escape” during the military’s Operation Restore Legacy last November. Speaking during cross-examination by lawyer Willard Madzimba who was representing presidential guard […]
Chamisa to ‘block’ elections if demands are not met
The MDC Alliance leader, Nelson Chamisa, has said his party would make sure no election takes place this month if their demands are not met by the Zimbabwe Electoral Commission (ZEC). Addressing party supporters after a demonstration against ZEC in Harare yesterday, Chamisa said his party would “block” the elections if their demands were ignored […]
MDC Alliance presidential candidate Nelson Chamisa says the opposition grouping plans to roll out more protests as the coalition ratches up pressure on the Zec to level the playing field ahead of this month’s harmonised elections. A buoyant Chamisa, addressing a bumper crowd of thousands of party supporters said the continued intransigence of the electoral […]